Farqiga U Dhaxeeya WordPress.com & WordPress.org | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Farqiga u dhexeeya WordPress.com & WordPress.org
Farqiga u dhexeeya WordPress.com & WordPress.org
Waa maxay faraqa u dhexeeya WordPress.com iyo WordPress.org? Soo baxday, way weyn tahay, gaar ahaan markaad rabto inaad si buuxda u maamusho boggaaga.
Maxaa sameeya New York Times, Katy Perry, Forbes, Shirkadda Walt Disney, iyo Sony Music dhamaantood waa ay wadaagaan?
Hagaag, hal shay, hay'adahan caanka ah - iyo kuwa kale oo badan - waxay leeyihiin shabakado ay ku shaqeeyaan WordPress.org, ka ilo furan ku qasbo in ka badan toban sano, ayaa ka dambeysay in ka badan rubuc ee internetka!
Waxay u badan tahay inaad taqaan WordPress, ugu yaraan WordPress.com dhinac kuu ogolaanaya inaad si dhakhso leh - oo sahlan - u abuurto blog aasaasi ah (oo leh meel kasta oo ka jirta .wordpress.com domain) oo ku dheji mawduucyo iyo qalab horay loo sii raray.
Laakin ku sii dhufo WordPress.org, oo si degdeg ah ayaad taas ku ogaan doontaa a Mareegaha WordPress oo iskii u martigeliyay, waxaa jira fursado badan oo badan.
Aan dhex galno oo aan ogaano wax walba - ilaa nitty iyo gritty - oo ku saabsan WordPress, labadaba bogagga .com iyo .org, oo aan ogaano sida aad u abuuri karto booska ugu habboon shabakada.
Markaa ka waran haddii aadan xitaa runtii ogeyn - ilaa hadda, dabcan - inay jiraan adeegyo WordPress oo kala duwan.
Dhib malahan Waxaan ku bilaabaynaa lafaha qaawan.
WordPress.com, WordPress-ka aad u badan tahay inaad taqaanid, waa browser-ku-saleysan-macnaha, wax la soo degis ah kuma jiraan- degel ganacsi oo run ahaantii caan ka ah isticmaalayaasha internetka. WordPress.com ayaa helaysa Booqdeyaal ka gaar ah bishiiba marka loo eego Amazon!
WordPress waxay u ogolaataa isticmaalayaasha, ka dib markay abuuraan akoon, inay dhistaan ​​oo ku martigeliyaan baloogkooda goobta WordPress kharash la'aan. Dhammaanteen waxaan jecelnahay bilaash, sax? The ku dhawaad ​​76.5 milyan oo blogs WordPress.com jira taas ayaa daliil u ah.
Markaad abuurto degelkaaga cusub, waxaad ogaan doontaa dhowr astaamood oo WordPress.com ah. Bilawga, waxaad samayn doontaa magacaaga domain - ilaa .wordpress.com la qabsaday dhamaadka.
Intaa waxaa dheer, WordPress wuxuu bixiyaa mawduucyo, kuwaas oo asal ahaan ah naqshado naqshadaysan, oo aad ka dooran karto si aad u habayso muuqaalka blogkaaga ama boggaaga. Qaar badan oo ka mid ah qaab-dhismeedkani waa bilaash, laakiin waxaad ku iibsan kartaa mawduuc qaali ah lacag.
Dhawr dhagsi oo aan culays ku jirin jeebkaada, mareegahaaga* waa uu shaqaynayaa. Voilà!
Relacionado: Kor u qaad Ciyaarta Blogging-kaaga oo leh 20 Talooyin oo ka yimid Mawduuc-abuurayaasha Maanta ugu Wanaagsan
Qiimaha Qarsoon ee Mareegta Xorta ah
Ah, markaa waxaad dareentay calaamadda. Aan sharaxo.
Marka hore, aan fahanno waxa ka gala samaynta mareegaha. Si loo sameeyo goob aasaasi ah oo shaqaynaysa, waxaad u baahan tahay dhawr waxyaalood:
Nidaamka Maareynta Maaddada (sida WordPress)
Koodhkaaga, pluginskaaga, sawiradaada, iwm.
Waxaa jira qalabyo kale oo aad u baahan doonto si aad u ilaaliso mareegaha, laakiin kuwani waa aasaaska.
WordPress.com waa adeeg martigelinaya degelka halkaas oo aad ku dejin karto balooggaaga ama goobtaada bilaash. Waxaa maamula shirkad shabakadeed Automattic, iyo sida aad ka arki karto liiska hubinta ee hoose, software-kiisa horay loo qorsheeyay wuxuu ka caawiyaa dadka isticmaala inay dhistaan ​​oo bilaabaan boggaga iyagoo siinaya magac domain, qalabyada iyo qaababka lagu naqshadeeyo goobta, iyo meel lagu martigeliyo.
Hadda, ku noqo * daabacaadda wanaagsan.
Iyadoo WordPress.com, website-ka aad abuurto maaha farsamo ahaan adaa leh. Hubaal, waxaad ku malaasay magacaaga - ama astaantaada - guud ahaan adiga. Laakin goobta ganacsiga ee WordPress, qorshaha $0 waxa uu la socdaa kharashyo farsamo ah.
1. Meel xadidan
Mid ka mid ah, iyadoo aysan jirin wax kharash ah si aad u dejiso ama u dejiso boggaaga bogga WordPress, goobta ayaa xaddidaysa booska iyada oo la siinayo 3 GB. Markaa haddii aad tahay mareegaha uu leeyahay muuqaalo ama sawirro tayo sare leh, booskaagu wuu koobnaan karaa, waxaana laga yaabaa inaad eegtid kharash aad u badan - illaa $25 bishii - si loogu casriyeeyo qorshaha.
2. Ku dheggan sidii domain-hoosaad
Intaa waxaa dheer, haddii aad ka welwelsan tahay inaad iska tuurto domainka .wordpress.com (taasi waxay kaa dhigaysaa si fudud subdomain ee WordPress), sidoo kale waa inaad saxan ka sameysaa taas, sidoo kale, maadaama domain caadadu u baahan yahay casriyeyn qorshe ah. Sidoo kale ma jiro ikhtiyaar loogu talagalay iimaylka domain - wax uu ganacsigaaga koraya uu ugu dambayn u baahan doono.
3. Metrics yar
Waxaa jira qaar ka mid ah mitiro muhiim ah si loo cabbiro dhabbaha ee balooggaaga ama degelkaaga - sida bounce iyo heerka beddelka - taas oo ku habboon, waxaad rabi lahayd inaad awood u yeelatid inaad la socotid shuruudahaaga. Laakiin waxaad ku xaddidan tahay qalabka falanqaynta ee ay bixiso WordPress, adiga oo aan haysan ikhtiyaar aad ku rakibto plugins ama software adiga kuu gaar ah, haddii aad isticmaasho adeegga bilaashka ah. Si aad u rakibto plugin adiga kuu gaar ah, waa inaad abuurtaa qorshe ganacsi oo lacag ah.
4. Xayeysiisyada WordPress
Qorshaha bilaashka ah wuxuu u oggolaanayaa WordPress.com inay xayeysiis ku dhejiso goobtaada fasax la'aan; ma haysatid wax xakameyn ah oo ku saabsan waxa ku jira ama meelaynta, iyo mid ka mid ah dakhliga xayaysiisku adiga kuguma dhaco. Saariddooda waxay u baahan tahay - waxaad qiyaastay - u cusboonaysiinta qorshe lacag leh.
5. Koontaroolka oo yaraada
Qorshahaaga bilaashka ah wuxuu si fudud u oggolaanayaa habaynta naqshadaynta aasaasiga ah - farabadan oo mawduucyo WordPress ah oo bilaash ah oo dooro mawduucyo aad iibsan karto - iyada oo aan la helin raaxada fursadaha CSS ama beddelka koodka. Qorshayaasha lacagta leh ee Premium iyo Business waxay u oggolaanayaan mawduuca qolo saddexaad iyo plugin dhexgalka, kaas oo gacan ka geysanaya kor u qaadida muuqaalka iyo shaqeynta mareegahaaga.
Tani, waxaad halis ugu jirtaa inaad haysato naqshadaynta blog-cutter-cutter; Iyada oo kaliya tiro yar oo mawduucyo WordPress ah oo bilaash ah, baloogyo badan ayaa laga yaabaa inay u ekaadaan kuwaaga. Waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad soo iibsato mawduuc cusub ama aad qof ku bixisid si uu kuu sameeyo caado kuu gaar ah, laakiin mar labaad, waxaad eegaysaa jeebka boorsadaada. Xulashada kharash-ku-oolnimada leh ee WordPress.com waxay noqotaa, bartaas, maaha mid kharash-ool ah.
6. Xeerarka Lacagta
Marka laga hadlayo kharashaadka, waxaa laga yaabaa inay jirto fursad waxaad jeclaan lahayd inaad lacag ka samayso internetka. Hagaag, qorshooyinka aasaasiga ah ee WordPress.com, ma awoodid inaad dhigato koodkaaga xayeysiisyada sida Google AdSense oo waa inaad raacdaa gaar Tilmaamaha isku xirka xiriirka oo la kafaalo qaaday soo dhejinta. Markaa lacag ka samaynta balooggaga sidoo kale waxay la imanaysaa qiimaheeda.
Relacionado: Sida loo Abuuro Pluginkaaga ugu horreeya ee WordPress
WordPress.com: Isku-dhafka Guryaha ee Internet-ka ee Guryaha
Haddii aad raadinayso inaad si dhakhso ah u hesho macluumaadkaaga shabakadda si aan buuq lahayn, oo aan xishood lahayn, markaa WordPress.com waa ikhtiyaar weyn. Sida suurtogalka ah, bilow ilaa dhamaad, waxaad ku heli kartaa mareegaha oo socodsiiya daqiiqado gudahood.
Sidoo kale waa doorasho aan xanuun lahayn haddii aad wax yar ka cabsato dhinacyada farsamada ee ku lug leh abuurista iyo ilaalinta mareegaha, ama kaliya aad rabto inaad hesho dareen bilow ah blogging. Joogteynta degelka WordPress.com waxay noqon kartaa ikhtiyaar ku meel gaar ah, sidoo kale, haddii aad mar dambe go'aansato inaad rabto u haaji macluumaadkaaga goobtaada iskeed u martigeliso.
Laakiin haddii aad isku dayayso inaad dhisto degel wakhti dheer ah iyo calaamad awood leh, markaa waxaad u baahan doontaa domainkaaga, oo waxaad hubaal ahaan u baahan doontaa koontarool badan oo ku saabsan muuqaalka iyo dareenka goobtaada iyada oo loo marayo plugins, templates, iyo sifooyinka la cusboonaysiiyay. .
Haddaba, marka aad tixgelinayso sifooyinka WordPress.com, uga fakar sidan: WordPress.com waa sida kiraysashada guri dabaq ah oo ka soo horjeeda lahaanshaha guri.
Markaad guri kiraysato, wax yar ayaad ka qabanaysaa sida uu u ekaanayo gurigu; Waxay u badan tahay in inta badan guryaha dhismuhu ay isku mid yihiin ilaa aad wax badan ka diyaariso hagaajinta quruxda badan sida goobta dabka ama qol jiif oo dheeraad ah. Intaa waxaa dheer, waxaad hoos imaanaysaa shuruucda iyo xeerarka shirkadda leh dhismahaaga.
Dhanka kale, daryeelka waxaa maamula koox shaqaale dayactir ah. Waxa kale oo ku ilaalinaya shaqaale ammaan ama albaab xaddidan oo kood ah. Maamulku waxa uu wax ka qabtaa dhammaan arrimaha mararka qaarkood qaska ah, ee daaha gadaashiisa ah ee socodsiinta hantida. Ugu dambeyntii, guri dabaq ah wuxuu u noqon karaa doorasho wanaagsan kuwa aan weli raadin guri waqti dheer ama iyagoo weli sahaminaya xaafad ama magaalo gaar ah.
Marka la isticmaalo goobta WordPress.com: dayactirka iyo amniga waxaa inta badan ilaaliya goobta lafteeda (marka laga reebo eraygaaga sirta ah ee sugan - adiga ayaa mas'uul ka ah furahaaga guri, ka dib). Waxaad haysataa koontarool yar oo ku saabsan muuqaalka iyo shaqeynta blogkaaga ilaa aad bixiso kharashyo dheeraad ah. Laakiin waxay noqon kartaa doorasho wanaagsan kuwa tijaabinaya biyaha blogging oo raba inay bilaabaan wax yar.
Si aan loogu khaldin dhiggeeda ganacsiga, WordPress.org waxaa badanaa loo tixraacaa sida WordPress iskeed u martigelisa.
Waxaa la sameeyay 2003 (waa ka weyn Twitter iyo Facebook!) Waxaa qoray Matt Mullenweg iyo Mike Little. Si fudud loo dhigo, waa ilo furan koodka hoos yimaada GNU Ruqsadda Guud ee Dadweynaha - taasoo la macno ah inay xor u tahay in la isticmaalo, wax ka beddelo, lagu dhiso, oo dib loo qaybiyo si aad u abuurto degelkaaga, baloog, ama xataa app. Waxaad si toos ah koodka uga soo dejisanaysaa bogga WordPress.org (iyo wakhtigan xaadirka ah, WordPress 4.8 waa la soo dejiyay 7,649,315 times , , , iyo tirinta!)
Koodhka isha waa qaab-dhismeedka - ka fikir sida qalfoofka - kaas oo loo isticmaalo jawi horumarineed si loo dhiso loona habeeyo goobtaada. Matoorku waxa uu la mid yahay kaaga iyo mareegaha kale ee isticmaala software-ka WordPress, laakiin sifooyinka soo hadhay iyo qaybaha la geli karo adigaa iska leh si aad u maamusho oo aad u abuurto. Macno samee?
Sababtoo ah koodka aad ku shaqayso waa qaab-dhismeedka oo kaliya, waa in loo isticmaalo si isku mid ah a martida webka, shirkad bixisa boos server-keeda si ay kuugu dejiso website. The martigelin adeegga aad doorato waxay ku xirnaan doontaa cadadka booska iyo baaxada aad u baahan tahay iyo sidoo kale miisaaniyadaada. Tusaale ahaan, Bilowga DreamHost waa la wadaagay martigelin qorshe wuxuu ka bilaabmaa kaliya $2.59 bishii.
WordPress.org sidoo kale waxay bixisaa ilo la taaban karo - loo yaqaan Warqadaha - si aad uga caawiso horumarinta mawduucyada iyo plugins ee boggaaga, oo ka mid ah mawduucyo kale oo badan oo faa'iido leh.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira golayaasha ay bulshadu hogaaminayso kuwaas oo gacan ka geysta ka jawaabista su'aalaha caadiga ah iyo caawinta dhibaatooyinka cilad-raadinta. Tilmaamaha bulshada ee WordPress.org waxay kuu oggolaanayaan inaad wada-shaqayn la yeelato oo aad la xidhiidho isticmaalayaasha kale si ay uga caawiyaan dhisitaanka boggaaga.
Sida Loo Sameeyo Mareegaha WordPress Oo Is-Hogaamiyay
Marka loo eego WordPress.org, kuwani waa tillaabooyinka lagu fulinayo hawlaha WordPress ee iskood isu martigeliyay.
Hel Martigeliyaha Shabakadda
Soo deji oo ku rakib WordPress
Aan in yar hoos u sii qodno mid kasta oo kuwaas ka mid ah.
Doorashada Martigeliyaha Shabakadda
Martigeliyaha mareegaha waa iibiyaha qolo saddexaad oo siiya meel bannaan oo server ah halkaasoo mareegahaagu ku kaydsan yahay oo ku siinaya siyaabaha looga geli karo intarneedka. Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo martigelineed oo dabacsan, oo ku saleysan baahida boggaaga.
DreamHost waxay bixisaa faa'iidooyin dheeraad ah iyada oo loo marayo qorshayaasha adeegeena, sida Magacyada domainka bilaashka ah iyo martigelinta aan xadidnayn. Waxaan dhawaan la shuraakoobay dadka at Automatic si ay u sameeyaan Jetpack Professional diyaar u ah DreamPress Plus iyo macaamiisha Sare.
Iyo diiwaanka: Waxaan ku nimid ansixiyeen by WordPress.org iyo awood ka badan 600,000 WordPress blogs iyo mareegaha!
Relacionado: Sida loo doorto Bixiyaha Martigelinta Shabakadda (Liiska hubinta 15-dhibcood)
Laakin xitaa haddii aad taqaanid martigelin bixiyaha Waxaad jeclaan lahayd inaad isticmaasho, weli waxaa jira arrinta doorashada saxda ah martigelin qorshe waayo, website. Halkan waxaa ah hage tixraac deg-deg ah oo fudud noocyada ugu badan ee martigelin la heli karo.
Websaydhkaaga ama balooggaga waxaa la dhigayaa server leh goobo kale, sidaas darteed kharashka martigelinta waa la wadaagaa macaamiisha dhexdooda. Qabashada: goobta si aad ah looga ganacsado ee server-kaaga waxa laga yaabaa inay saamayso waxqabadka goobtaada.
Server Virtual Private Server
VPS waxay u shaqeysaa sidii adeegayaal badan oo macmal ah, in kasta oo isticmaalayaashu wadaagaan hal adeeg iyo agab; tallaabo u dhaxaysa martigelinta la wadaago iyo server ka go'an. Si aad wax badan u barato, hubi tan Tilmaamaha bilowga ah ee VPS.
server heegan ah
Xakamaynta ugu badan iyo agabka qiimo sare leh; adiga ayaa gaar kiraysanaya adeegga loo qoondeeyey hana ka werwerin la wadaagida agabka goobaha kale.
Intaa waxaa dheer, DreamHost waxay bixisaa DreamPress, saddex Qorshayaasha martigelinta WordPress ee la maareeyay, halkaas oo qaar badan oo ka mid ah qaybaha farsamada ee hawlgalka WordPress - sida cusboonaysiinta, amniga, iyo kaydinta - ay gacanta ku hayaan khubaradayada.
Sidan, DreamPress waxay muraayad u tahay fududaynta isticmaalka ikhtiyaarka WordPress.com. Waxaa dheer, waxaad ku hubaysan tahay awood ka badan inta aad ka heli lahayd qorshe la wadaago oo aasaasi ah waxaadna heli kartaa taageerada 24/7, sifada waxqabadka aadka loo habeeyey, iyo maarayn fudud. Oo miyaan soo sheegnay xawaaraha? DreamPress, adeeggaagu wuxuu shan jeer ka dheereeyaa martigelinta caadiga ah ee la wadaago.
Ugu dambeyntii, xalka WordPress ee la maareeyay ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee bilowgayaasha WordPress, isagoo ku siinaya xakameyn badan iyo walbahaar yar.
Ku billow Mareegahaaga WordPress DreamHost
Eeg Qorshayaasha WordPress
Ku rakibidda WordPress
Inaad martida webka ayaa gacanta ku haysa habaynta software-ka, waxa jira dhawr waxyaalood oo aad u baahan doonto inaad u samayso rakibo WordPress.
Shuruudo kasta waxaa lagu sharaxay WordPress.org's mobile tilmaamaha.
Ugu dambayn, Dukumentiyada Waxay kuu ogolaanaysaa inaad hesho hagitaan xagga dhismaha iyo isticmaalka dhammaan waxyaabaha dheeriga ah: plugins, themes, iwm. premium plugin ama soo geliyaan a caadadii theme. Cirku waa xad! Xitaa waad abuuri kartaa cinwaanada email iyadoo lala kaashanayo website - qalab weyn oo ganacsi.
Laakiin xorriyaddaas - sida Eleanor Roosevelt yidhi - waxay timaaddaa mas'uuliyad dheeraad ah.
Iyadoo gacanta lagu hayo website iyo awoodda aad u leedahay in aad beddesho koodka, adiga ayaa mas'uul ka noqon doona cusboonaysiinta WordPress software sida versions cusub la sii daayo, bixinta kaaga web martigelin adeegyada sanad walba, iyadoo lagu ilaalinayo goobta kaydka lagama maarmaanka ah iyo taxaddarrada amniga (haddii aadan dooran gacan-ka-bax maamulay WordPress martigelin qorshe, taasi waa), iyo ka ilaalinta spamka iyo khaladaad. Haddii ay wax qaldamaan oo aadan aqoon sida loo hagaajiyo, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad qabsato xirfadle ku caawiya.
WordPress.org: Farsamada yaqaan Bungalow ee Internet Real Estate
Xusuusnow isbarbardhigga gurigeenna sidii hore? Hagaag, si ka duwan kiraysashada guri dabaq ah, isticmaalka software-ka WordPress waa sida lahaanshaha gurigaaga.
Guri, adiga ayaa gabi ahaanba mas'uul ka ah dayactirka guriga iyo dayrka, bixinta deynta amaahda bil kasta, qaadashada tallaabooyinka amniga, iyo samaynta dayactirka iyo hagaajinta lagama maarmaanka ah. Laakiin, marka aad leedahay gurigaaga, waxaad haysataa shati weyn oo aad ku beddesho sifooyinka - sida qaadista derbiga ama bedelida rinjiga gida - iyo sidoo kale waxaad leedahay hanti run ahaantii adigaa iska leh.
Waana sida ay tahay is-martigelinta WordPress. Xakamaynta ayaa ku jirta gacmahaaga, sidoo kale waa masuuliyada korodhay ee lagu ilaalinayo goobtaada. Waad awoodaa badal kaaga WordPress theme iyo code, adiguna dhab ahaantii Lahaanshaha macluumaadkaaga onlaynka ah. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay haddii aad ku dadaalayso inaad abuurto sumad waarta ama lacag samayn a website.
Xulashada adigaa iska leh
Doorashadaada WordPress.org ama WordPress.com runtii waxay kuxirantahay waxaad rabto inaad ka baxdo website iyo, dabcan, miisaaniyadaada.
Hadaba waa intee a WordPress website dhab ahaantii kharash? Hagahan ayaa kor u qaadaya kharashyada sanadlaha ah ee shabakadaha WordPress ee kala duwan - lacag la'aan, miisaaniyad-saaxiibtinimo, dhexda, iyo waxqabad sare - si aad u dooran karto ikhtiyaarka saxda ah ee yoolalkaaga (iyo boorsada jeebka).
Xusuusnow, adiga martigelin bixiyaha waxay qayb weyn ka qaadan doontaa wadarta kharashka, markaa iska hubi inaad doorato mid wanaagsan. Waxaan ku talin lahayn in la eego Starter Shared our martigelin qorshe haddii aad raadinayso inaad ku hesho bog online wax ka yar $3 bishii.
Ugu dambeyntii, waxaad ku socon doontaa wadadii aad ku dooran lahayd goobta saxda ah ee kaaga website ka dib markaad falanqeyso yoolalkaaga, heerkaaga raaxada ee hawlaha farsamada, iyo miisaaniyadaada.
WordPress ayaa sugaya!
Diyaar ma u tahay inaad dhisto Boggaga WordPress?
Haddii aad u baahan tahay caawimo doorashada goob blogging, fahamka martigelinta WordPress, ama qaadashada mawduuc bilaash ah oo cajiib ah, waan ku caawin karnaa! Isdiiwaangeli si aad u hesho maqaalkeena bishiiba mar si aadan maqaal uga maqnaan.
Nala hadal WordPress
Ma tahay isticmaale WordPress ah oo daacad ah? Sideed uga faa'iidaysatay WordPress.com ama WordPress.org dhisidda kaaga website or blog? Maxay yihiin sifooyinka adeegyada WordPress ee adiga kuugu muhiimsan? Ku biir kooxda Facebook DreamHost oo noo sheeg waxaad u malaynayso!
Waxaan shaqaaleysiinaynaa macluumaad cusub oo ku saabsan Dhul Raadinta iyo SMX
7 Tilmaamaha Google Analytics ee Cabbiraadda Raadinta Noolaha